Global Voices teny Malagasy · Fitantaran’olon-tsotra mikasika ny Lalàna tamin’ny Janoary 2014
Lalàna · Janoary, 2014
Tantara mikasika ny Lalàna tamin'ny Janoary, 2014
Voaheloka Ho Faty Noho Ny Namonoany An'i Ghazala Javed Mpihira Pashto Ny Vadiny Taloha
Mpanoratra Muhammad Farhan · Azia Atsimo
Nanohitra tamin-kafanam-po ny faneren'ny Talibana azy tsy hihira i Ghazala Javed fony fahavelony ary nijoro nanohitra ny fametrahana ny Taliban tany amin'ny Swat tanindrazany.
06 Janoary 2014
Tifirin'ny Polisy Ireo Mpiasa Mpitokona Avy Amin'ny Fanenoman-damba Tao Kambodza
Nampiasa bala tena izy ny polisy tao Kambodza mba hanaparitanana ny fitokonan'ireo mpiasa'ny fanenoman-damba. Nofaritana ho ny “ratsy indrindra tamin'ny herisetram-panjakana natao tamin'ny sivily nitranga tao Kambodza tato anatin'ny dimiambinifolo taona” izy io.
Sekoly 100 Mahery May Tanaty Herisetra Fanoherana Fifidianana Tao Bangladesh
"Raha ny firenena no giazanao tsy ho afa-mihetsika noho ny resaka hetsi-panoherana, ahoana no hitondranao ity firenana ity hiroso?"
Nahoana No Nidongy Tsy Hanao Fifidianana Ny Mpanohitra Ao Bangladesh
Mpanoratra পান্থ রহমান রেজা (Pantha) · Bangladesh
Tsy nandray anjara tamin'ny fifidianana ankapobeny ny ankamaroan'ny antoko politika tao Bangladesh. Notakian'izy ireo ny hananganana governemanta tsy miandany hikarakara izany.
04 Janoary 2014
Bangladesh : Voafidy 154 Sahady Tsy Mbola Nanomboka Fandrotsaham-Bato Akory
Koa satria moa maro ny antoko mpanohitra manao ankivy ny fifidianana ankapobeny hotontosaina dia efa fantatra sahady ny ankamaroan'ireo mpandresy.So many parties are boycotting the upcoming general election, that most of the winners have already been decided.
02 Janoary 2014
Mpanoratra Mong Palatino · Singapaoro
Nampitsahatra ny asany an-tserasera ny tranonkalam-baovao miresaka fiarahamonina sy politika Breakfast Network ao Singapore rehefa tsy nanaiky ny haka fahazoan-dalàna vaovao avy amin'ny fanjkana. Namelona adihevitra indray amin'ny lazain'ny governemanta Singaporeana amin'izay antsoiny hoe fomba "fikasihana maivana" ny fametrahana lalànan'ny Internet ity raharaha ity.